SomaliTalk.com » Maqaallo
Home » Maqaallo
Warsaxaafadeed maanta oo Jimce ah, September 24, 2021, kasoo baxay Maxkamadda Hague ayaa shaaca ka qaaday in go’aankii badda xadaynteeda ay ku dhawaaqi doonto 12ka October 2021, saacadda 3-da galabnimo waqtiga Hauge, Netherlands. Waxaana go’aankaas maxkamadda ka hor akhinaya madaxa maxkamadda ICJ. Warsaxaafadeedku wuxuu intaas raaciyey, maadaama uu jiro caabuqa COVID-19, waxaa gudaha maxkamadda...
Afar Dhibaato Oo Walwal Ku Haya Ummada Soomaaliyeed
Dhibaatada Soomaaliya Saddex Arin ayaa Dusha looga saarey waxayna kala yihiin Qabiil, Qori iyo Qaad, hase yeeshe aniga waxaana ku darey Baraha Bulshada oo aan uga dhigey midka Afaraad. 1-Qabiilka markaan Fiirno waa Mid Koowaad ee Bulshada Dhibaatada ku haya waxaana Caqabad ku yahay in Soomaaliya ay israacdo 2-Qoriga Markii ay Burburtey Dowladii Dhexe ee Soomaaliya ayuu Qoriga uu Noqdey mid isna...
Dr. Baadiyow Badbaadinta Qaranka – (Rescuing A Nation). -Samatabixinta Dadkayga iyo Dalkayga. Ra’iisul wasaare uu dalku maanta u baahan yahay. Dr. Baadiyow wuxuu noqon lahaa Ra’iisul wasaare ay shacabka Soomaaliyed jecel yihiin balse aysan jecleyn shisheeyaha sida Madaxweyne Farmaajo oo kale. Hadii ay noqoto xaga wada shaqeeynta labada ninba mudo dheer ayaan aqaanay waa ay...
Garashadu waa deeq Eebbe bixiyo waxaana dadka loogu qaybiyey sida loogu qaybiyey deeqaha kale ee Eebbe baxsho; ubadka, xoolaha, quruxda iwm. Garashadu maaha wax qofku isagu keensado, oo uu la yimaado, ee waa dhalan Waaqa weyni isagu siiyo midka uu la doono.Garaadku waa saldhiga garashadu ka soo fusho, maskaxduna waa weelka dhiteysa jaadadka kala duwan ee garashada. Garashadu waa kortaa,hadba waaga...
Waxaan ugu horrayn eegaynaa sababaha daakhiliga ah oo labo qaybood kala ah: in laga waayo waxqabadkii laga filayey ama ay balanqaadeen ama masuuliyadooda shaqo ahayd iyo inay galaan gafaf waaweyn oo aan meekhaankooda u qalmin ama aan marna laga filaneyn. Qeybta 1aad: inay ka soo bixi waayaan xilkii saarnaa ama laga waayo wixii laga filayey ama ay balanqaadeen. Waxaa madaxdeenii kala dambeysey wada...
Halkudheg: sh. axmed cabdisamad
Ololihii doorashada madaxtinnimada Soomaaliya iyo loollameyaashii tartamay iyo xildhibaannada baarlamaanka ee codeeyay iyo madaxweynihii hore oo aqbalay tirsigii looga badiyay ayaa dhammaantood ah isbeddel siiyaalku tixgelin doono oo waayo badan la xusuusnaan doono. Qaabkii ay doorashadii 8-da bisha labaad, 2017-ka, ay u dhacday baa ahaa mid si walba u qurxoonaa oo qaarad walba, dal walba, magaalo...
Isbadal iyo Rajo Soomaaliyeed
Maqaalo taxane ah oo ku saabsan talooyin xukuumadda soomalia Qeybtii Koowaad Waxaa Soomaalidu ku taahaysay ama Ilahay ka baryeysay ISBADAL khayr qaba muddo dheer. Hadaba waxaa xildhibaanadii Soomalida oo loo bixiyeye Xildhibaanada ISBADAL-DOONKA ah waxay uga jawaabeen rajadaas in ay doortaann Madaxweyna Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ballan qaadiyey...
Qaybtii 1aad Sheekadii Tahribkii iyo Tahlukadii aan galay .W.Q. Qareen/ Khadar Aar.
Waxaa beryahan danbe si wayn usoo shaacbaxay Maqalka erayga TAHRIIB kaasi oo aad ka maqlayso dhamaan Idacadaha ,Guryaha,Maqaaxiyaha,Wadooyinka iyo meelkasta oo Laba Qof oo Somaliyii ay isugu yimadaan ,iyada oo laga sheekaynaayo dhibatada aan kala joogsiga lahayn ee soo wajahday dhalintii Somaliyeed. Sida Runtaa hadii aan is idhaahdo Macnee Erayga “TAHRIIB” waxa ay ila tahay in uu ka yimi...
1985 ayaa Xisbigii Hantiwadaagga Kacaanka Somaliyeed XHKS ee kaligi wadanka Xisbi ahaan uga jiray xiligaas,Isku soo qaaday in Siyaasadda Kacaanka wax si ka yihiin, waxaa laga falanqooday in wax la saxo oo aan loo fadhin sidaana ayna ku sii socon, Waxaa la yiri Barnaamij iyo qorshe haloo sameeyo Arintaas, waxaa la isku soo qaaday Magacii loo bixinlahaa Barnaamijka, waxaa Afka la soo marin waayay...
Warqad gaar ah oo ku socota wasiirka ina-adeerkay ah
1- Mudane wasiir xilka aad haysid waa xil ummadeed, wax aan danta ummadda ahayna uma adeegsan kartid diin ahaan iyo nidaam ahaanba. Adigu si gaar ah uguma danaysan kartid, tolkaana kuma naas-nuujin kartid oo adiga iyo iyaguba ummadda ayaad ula simantihiin. 2- Ina adeer xilkaan waa masuuliyad Ilaahay aakhiro kaala xisaabtamayo oo haddaad wanaajisid iyo haddaad xumaysidba abaalmarinteeda agtiisa ayaad...
Magaallada Muqdisho Magaallo Fiicnaan jirtay Balse Xumaatay ???!!!!
Horudhac : Magaallada Muqdisho oo ah Magaalladaan ku soo Koray , waxay aheyd Magaallo aad iyo aad Nabad u ah mudanna in lagu tilmaamo Magaallo Fiican ( بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ) ,se waxay is Badashay Jan,1991 Markii uu Ka Baxay Madaxweyne Mohamed Siyaad Barre oo haatan loo xiisay se waagaas la wada Nacay. Magaallada Muqdisho oo Quruxdeeda aan haatan ka hor ku tilmaamay Sidatan...
Maadaama ay marxalad cusub galayaan wadahadalada u dhaxeeya DFS iyo Maamulka Somaliland hadaba maxay la tagaysaa Dowladd kulamada soo socda ?
Waxaa marxalad cusub galayo wadahadaladii u dhaxeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland, ka dib markii ay Magaalada Djabuuti isku arkeeen Waftiyo ka kala socday Labada dhinac,Kuwaas oo ay kala hogaaminayeen Madaxweynaha Dowladda Federaalka Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo. Wadahadalo dheer ka dib, waxa ay labada dhinac isku raaceen qodobo lix ah oo...
Federaalkee bay ka tirsan yihiin Maamul Goboleedyada Soomaaliya ma midka Itoobiya mise kan Soomaaliya ?
Ka dib dhicintaankii Dowladda Dhexe,Waxaa dalka ka dhacay isbadal saameeyey guud ahaan Mujtamica Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka daneeya siyaasadda. Isbadalkan ka dhashay burburka dowladnimo, ayaa soo saaray siyaasiyiin aan noocadoo kale wali soo marin dadka Soomaalida ah inta la xasuusto, tusaale ahaan waxa dhashay siyaasiyiin aan waxba ka xishooneynin,waxba xeerineynin, islamarkaana ku tumanayo wax...
Sirta iyo Siyaasada ka Dambeysa Musuq Maasuqa lagu Eedeeyay Wasaarado badan oo ka tirsan Dowlada Soomaaliya.
Sida cid kasta u muuqata, Soomaaliya waxaa hareeyay Musuqmaasuq kaas oo sababay in hadafka ah horumar uu gaaro dalku uu gaabis galo, waxaana warbixin ay soo saartay hey’ada u xilsaaran dabagalka musuqa ay sheegtay in sida waayihii danbe caadada aheyd Soomaaliya ay gashay kaalinta koowaad ee wax isdaba marinta dalalka caalamka oo dhan, waxaana iyada oo taasi ay jirtay 5-tii December markii shaqada...
Khilaafka Madaxda Soomaaliya, Khalad aan wax laga baran!!
Hadal heynta ugu badan ee arimaha soomaaliya ayaa noqotay khilaafka madaxdad soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha. Shacabka, warbaahinta iyo xittaa hay’adaha dawladda sida baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa la kala saftay madaxda is qabatay. Madaxda is qabatay midkasta wuxuu ku doodayaa anigaa waddo sharci ah ku taagan, waxay kale oo ku doodayaan inay diyaar u yihiin in sharciga...
Siyaasiyiinta Soomaalida oo dalkii u gacan geliyey Itoobiya xilli rajo laga qabay qaran Soomaaliyeed oo mid ah islamarkaana madax banaan
Siyaasiyiinta Soomaalida, ayaa dalkii u gacan geliyey taliska Xabashida ee ay hormuudka u tahay Qowmiyadda Tigreeda xilli rajo laga qabay qaran Soomaaliyeed oo mid ah islamarkaana madax banaan.Waana waxa ay ku saabsan tahay qormadan gaaban.Itoobiya ayaa si dadban u la wareegtay dalkii, Iyadoo ka faa’iideysaneysa kala qeybsanaanta dadka Soomaalida ah iyo waliba waxtar-xumida Siyaasiyiintooda. Maadaama...
Afkaaga Hooyo Waa Hodan ee Hor Mari!!
Af Soomaaligu waxaa uu ka mid yahay luuqaddaha Geeska Afrika kuwa ay ku Hadlaan dadka ugu tiro badani. Dadka Soomaaliyeed ee ku hadlana waxay ku dhaqan yihiin deegaano aad u baaxad weyn oo u dhexeeya gacanka Tojorra ilaa iyo webiga Tana ee Waqooyiga Kiiniya waana luuqad mudan in la hor mariyo . xigasho cuttubkan Qoraa Axmad haybe.. Luuqaddu waxay ka mid tahay Nimbcooyinka Alle ugu deeqay Bini‘...
Mooshinka Xaqdaradda Ah Waa Mid Madaxwayne Hassan Sheikh Mohamoud Iyo Xulufadiisu: Uga Soo Horjeedaan ‘Xisaabtanka Iyo Geedi Soconka Nabada’
Dulucda arimaha la isku haysto Soomaaliya, waxaa abuuray ama sii horinaayo – waa hugriga wayn ee uga jira shisheeyaha deegaanka Soomaaliyeed iyo khayraadkiisa oo leh dhul istaraajiyadeed oo Bad, Beri iyo Cir ka hodana ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa QurboJoogta Waqooyiga America isla dhexmarayaan, in Wasiiro ka tirsan Xukuumada Prime Minister Abdiweli Sheik Ahmed, oo ay ugu horeeyaan: Wasiirka...
Xildhibaanada Baarlamaanka laba arrin mid ha doorteen
Yaabka Yaabkiisa horta Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha maxaa ka dhaxeeya, waxaase ka daran oo la yaab leh maxaa ka dhexeeya Xildhibaanada Baarlamaanka waa tan ay kala raacen ama ay laka safteen Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha, waa arrin layaab leh waxaan la dhihi karaa meesha wax dan guud ah ma talo. Xildhibaanada Baarlamaanka laba arrin mid ha doorteen : Tan kowaad in ay Xidhibaanda...
Ma Ilaashan Karnaa Hanaankeena Dawladnimo ee Curdanka ah?
Bishii Julay 1960 ayeey ahayd markii Soomaaliya ay hanatay nidaam dawladeed oo madaxbanaan, kaasoo ay ku lug lahaayeen dhinacyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen golihii wisaayada ee qaramada midoobay, maamulkii wisaayada ee Talyaaniga, golihii la talinta oo ka koobna diblomaasiyiin ka kala socday Masar, Kolombiya iyo Filibiin, xisbiyadii siyaasadeed, maamulkii daakhiliga ahaa, iyo dhinaca waqooyiga...
Radio Muqdisho iyo Khilaafka Madaxda Dowladda.
Raadiyo Muqdisho waxaa la Aasaasay 1950-kii, tan iyo waagaas waxaa uu soo maray marxalado kala gedisan oo waxaa maamulayey dowlado iyo Xukuumado kala duwan, waxaa kaloo maamulay qaar ka mid ah Hogamiyaashii Magaalada Muqdisho sida Cali Mahdi iyo Janaraal Caydiid. Siyaasadda lagu hago Radiyo Muqdisho waxaad moodaa iney ahayd mid la isu meerin jirey, waxaan ka wadaa waxa uu had iyo jeer daacad u ahaan...
Xal Ma u Heli Karnaa Khilaafka Madaxdeena?
Bishii Janaayo 1991 kullan ay xarunta Villa Baydhaba ku lahaayeen waxgarad Soomaaliyeed oo loo xulay xal u helidda dagaalkii hubaysnaa ee ka qarxay maalmo ka hor magaalada Muqdisho ayaa waxaa hadal ka jeediyay nin oday ahaa oo ka tirsanaa saraakiishii ciidanka Soomaaliyeed isaga oo oranaya “ Taariikhda ayaa na xusi doonta haddii aan maanta ku guulaysano in aan dagaalka joojino oo aan dalka nabad...
Moshinkii xaaranta ahaa, oo mooshin xalaal ah dhalay
“Aduunyada nin nooloow maxaa aragti kuu laaban” Xildhibaanadii ku guul daraysatay moshinkii ay ka keeneen Raysal wasaaraha ayaa maanta aad uga carooday inuusan qabsoomin fadhigii baarlamaanka oo logu qaybin lahaa moshin ka dhan ah Xukuumada, shirar u socday ilaa galabta ayaa waxaa la soo wariyey iney goaan ku gaareen iney moshin ka keenaan Gudoomiye Jawaari oo xaqiiqdii muujiyey daciifnimo...